Rafitra - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Process"
Talata 23 Jona 2020 by Sara
Ny Dynamic Data Collector dia tsipika PC izay manangona ny angona rehetra avy amin'ny tsipika famolavolana tsofina. Afaka manomboka / mijanona ny masinina, mandrefy ny fanjifana angovo, ny fahombiazan'ny tsipika ary maro hafa hanatsarana ny fahaizanao. Mahatonga ny angona misy amin'ny SQL, MYSQL, sns amin'ny fanaovana tatitra.
Notsongaina ambany: fahaiza-manao andalana
Fampiharana Application Dynamic Data Collector Server
Ity fampiharana Dynamic Data Collector Server ity dia manangona angona avy amin'ireo fisieurina Data Dynamic samihafa amin'ny andalana. Avy eo, dia mitahiry sy mitahiry ny angon-drakitra izy rehefa afaka kelikely. Ny angona momba ny fanaraha-maso andalana dia misy ny fandrefesana ny fahombiazan'ny andalana, ny fanjifana angovo, sns.
Ny dehumidifier dia manala ny hamandoana avy amin'ny rivotra amin'ny tontolon'ny famokarana anao. Mampiasa rano bobongolo hangatsiaka ny rivotra izy io, ary mampihena ny teboka ando. Misoroka ny fandefasana alaina amin'ny milina / masinao.
Ny mpanara-maso ny tsipika dia mamela ny fanaraha-maso ireo masontsivana sy fiasan'ny milina sy ny tsipika famokarana. Mifehy ny fikorianan'ny tavoahangy, tetezamita… Ho an'ny fahombiazan'ny tsipika avo kokoa!